Isniin, April 14, 2014 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Aragtiyo, aragtiyo, guji… Waxaan si dhab ah ula yaabanahay sababta aan wali u cabbirno una xayeysiino ku saleysan cabirradan. MassiveImpact waa shabakad xayeysiis moobil ah oo gaareysa in ka badan 1 bilyan oo isticmaaleyaasha internet-ka moobiilka oo ka kala socda 190 waddan mana yeelaan. Waxay isticmaalaan CPA, ama kharashkiiba halkii tallaabo, si ay u go'aamiyaan qiimahooda xayeysiinta. Taasi waa sax… waxaad bixinaysaa oo keliya marka uu jiro beddel dhab ah! Tani waxay ka dhigan tahay in soo noqoshadaadii maalgashiga la damaanad qaaday. MassiveImpact waxay bixisaa nooc xayaysiis moobiil oo 2-tier ah, iyadoo la adeegsanayo